Eyona midlalo ilungileyo yesithuthuthu kwiPC | Iindaba zeGajethi
Eyona midlalo ilungileyo yesithuthuthu kwiPC
UPaco L Gutierrez | 27/03/2021 18:30 | ngokubanzi, Videogames
Imidlalo yevidiyo yeemoto ngokungathandabuzekiyo yeyona ithandwayo phakathi kwesantya kunye neadrenaline, phakathi kweyona idlalwayo ihlala ikwimeko yemoto ividiyo yevidiyo, kodwa kuthekani ukuba into esiyifunayo kukothula konke ukungavisisani kwethu ngasemva kwesithuthuthu? Sinezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo xa ukhetha owuphi umdlalo oza kudlala nawo, kodwa ngokucacileyo ungaphantsi kwikhathalogu esiyifumana ngokwemidlalo yevidiyo yokubaleka.
Sineentlobo ngeentlobo phakathi kwemizekelo embalwa ekhoyo, kuba sivela kubalingisi bokhuphiswano lwehlabathi lwezithuthuthu, ukuya kwi-motocross, apho ukutsiba okukhulu kunye nezikere eziseludakeni zivelile. Kule meko, umda okhethwe ukuba udlale kukulawula okukude, kuba ivili lokuqhuba alinakuba lolona lufanelekileyo ukuqhuba isithuthuthu, kwaye kunzima ukufumana umzobo wesithuthuthu esinee swingarm zokwenza umsebenzi wasekhaya. Kule nqaku siza kuya kwiinkcukacha zezona zilungileyo Imidlalo yezithuthuthu yePC.
1 I-MotoGP 21
1.1 Imowudi ekwi-Intanethi
2 I-MXGP 2020
2.1 Imowudi ekwi-Intanethi
3 Khwela 4
3.1 Imowudi ekwi-Intanethi
4 I-Monster Energy Supercross
4.1 Imowudi ekwi-Intanethi
Esi sisimo sezithuthuthu esisekwe kwiMidlalo yeHlabathi ye-MotoGP, enezinto ezifanayo ezinyukayo esizibonayo kubuntshatsheli bokwenyani kunye nabagibeli abafanayo, njengoko kusisiqhelo sonyaka kuyinto eqhubekayo phakathi kweenguqulelo, ke ngoko sikhetha uguqulelo khetha umdlalo oza kudlalwa uya kufana kakhulu. Ewe kunjalo, ibonisa ukuba istudiyo simamela abalandeli bayo, ke Siza kubona iimpazamo ezininzi ezilungisiweyo kwizitolimende zangaphambili, ukongeza kwinkangeleko yemifanekiso ehlaziyiweyo.
Nangona icacile, eyona asethi inkulu kulo mdlalo wevidiyo kukuba yonke into ebonakalayo ebonakalayo isemthethweni, enkosi kwilayisensi yeNdebe yeHlabathi, siya kuba namaqela okwenyani, abaqhubi beenqwelo moya, izithuthuthu kunye neesekethe. Le ayisiyomhlaba kuphela iklasi yenkulumbuso, sinayo yonke into esinokuyibona kwiMoto2, Moto3 kunye ne500cc imivumbo emibini kunye nembali yeMotoGP ukubetha kane okanye imo entsha yeMotoE.
Sikwaqaqambisa imo yokusebenza epheleleyo esivumela ukuba sisayine iqela lokwenyani okanye senze eyethu. Endaweni yokulandelelana kwemidyarho ngaphandle kwenkuthazo, kufuneka ukongeza kukhuphiswano, kufuneka silawule imiba eyahlukeneyo yomsebenzi wethu wobuchwephesha njengabaqhubi beenqwelomoya, kubandakanya abaxhasi, ukusayina abasebenzi okanye ukuvela kwentaba yethu.
Sinendlela ye-Intanethi yabadlali abalishumi elinambini edityanisiweyo kwaye onokonwabela ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje Ukuphikisana kukhuphiswano lukawonkewonke nolwabucala okanye ukhethe nokukhuphisana kwixesha elitsha le-eSport. Konke oku ngeeseva ezinikezelweyo eziqinisekisa imeko efanelekileyo yokudlala ngaphandle kwelag. Lo mdlalo uhlaziywa ngokuqhubekayo ngabaphuhlisi bawo ukuze uphuculwe ngamabala athile.
Umdlalo weMotocross ekugqibeleni wabona ukukhanya ngaphandle kwesibetho, umdlalo ugcina zonke iimpawu zalowo ungaphambili kodwa uphucula kakhulu kwicandelo lomzobo. Ngumdlalo wokuqala apho singadlala khona njengoJorge Prado, umqhubi wenqwelomoya waseGalician omele iSpain kulo mdlalo. Isandi esimnandi sihamba inyathelo elinye kwaye siphinda sibuyele kwingxolo yezithuthuthu ezingazange zabonwa ngaphambili njengamazwi nokhuthazo loluntu kubaqhubi beenqwelomoya.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, lo mdlalo ubandakanya iisekethe ezili-19 ezenza ixesha le-2020 emva kokubandakanya uLommel kunye neXanadu ngokweenkcukacha. Sinezinto esinazo Abakhweli abangama-68 beendidi ezahlukeneyo, ukusuka kwi-250cc ukuya kwi-450cc kunye nezinto ezingaphezu kwe-10.000 ezisemthethweni zokwenza ukuba zonke izinto zihle kunye nokusebenza kwesithuthuthu sethu.
Akukude kakhulu ngokweendlela zemidlalo kubandakanya i-classic Umsebenzi, iGrand Prix, ukulingwa kwexesha kunye neentshatsheli. Kwindlela yokulandela umkhondo injongo yethu iya kuba kukuqala kwelona lisezantsi kunye nomqhubi wethu wenqwelomoya esiza kwenza ngokwezifiso zethu kwaye siya kufumana amava kunye nabaxhasi ukunyukela phezulu.
Imowudi yabadlali abaninzi ayinakulahleka, ukuphucula kakhulu eli candelo kubandakanya ekugqibeleni abancedisi abazinikeleyo. Oku kuvumela imidlalo engamanzi engaphezulu ngaphandle kwesoyikiso esoyikisayo esonakalisa ugqatso. Sikwanendlela yoLawulo loMdyarho yokwenza iitumente zethu kwaye sizisasaze ngqo ngokunika iikhamera.
Isaga sabadali beMotoGP ebonelela ngombono owahlukileyo wento yokubaleka yezithuthuthu, ukutsala umbono ongathandekiyo. Masithi yigran turismo yezithuthuthu, ukubheja ukulinganisa usebenzisa phantse nasiphi na isithuthuthu esitratwayo esicinga ngaso.
Kwisithuba sayo sesine sifumana imbonakalo yomzobo ehlengahlengisiweyo eza kuzalisa isizukulwana esilandelayo sePS5 kunye nochungechunge X consoles kunye neePC ezinamandla. Ngethuba lokuqala siza kubona imeko yemozulu elindelekileyo, eza kusivumela ukuba siqale umdlalo kunye nesibhakabhaka esinamafu kwaye siyiphele kunetha kakhulu. Ubusuku nemini umjikelo ubandakanyiwe ukuze sikwazi ukuqala ubuhlanga emva kwemini size sigqibe ngorhatya.
Iindlela zemidlalo azitshintshi kangako kunye neyangaphambili kwaye kukuba siqala kwimowudi yomsebenzi apho ukhetho lwethu lokuqala luligi yengingqi esizimisele ukuqala kuyo njengengcali. Kuxhomekeke koko sikukhethayo, siya kukhuphisana kwisekethe enye okanye ezinye apho kuya kufuneka siphumelele iimvavanyo ezahlukeneyo ukuze sinyuke. Umdlalo ubanga ngokwendlela yokudlala kwaye unikezela ngobunyani obuninzi kodwa nobunzima obuphezulu ukuba sifuna ukusingatha intaba ngesantya esipheleleyo.
Sinegaraji kunye nemali esinokuyifumana njengoko siqhubela phambili kumdlalo, injongo yethu iya kuba kukugcwalisa legaraji ngezithuthuthu zazo zonke iindawo ezifudukayo. kwaye uziphucule kangangoko. Njengokuba siqhubela phambili emdlalweni siza kuzenzela igama kwaye oku kuzakusinika ithuba lokutsiba kuligi yelizwe kunye neeSuperBikes zehlabathi.
Ikhathalogu yezithuthuthu ifikelela kwinani le Ama-Moor asemthethweni angama-175 avela kubenzi abahlukeneyo abangama-22, ukususela ngo-1966 ukuza kuthi ga ngoku. Kwelinye icala sifumana ukubetha Iisekethe ezingama-30 zokwenyani, iphinde yenziwa yadinwa. Icandelo lomzobo liye lagcinwa ngononophelo olukhulu, kubalwa ukuskena kwelaser okungu-3d kuzo zombini ii-mounts kunye nabaqhubi beenqwelo moya. Oopopayi babagibeli kunye nezithuthuthu ezishukumayo ziyinyani, ziyenza icace ixesha kunye nokhathalelo olunikelwe kwicandelo elibonakalayo.
Umdlalo unemowudi elula kwi-intanethi ngeendlela ezimbalwa zomdlalo, kodwa ziya kuba luvavanyo olunzima lwe-litmus ukubonisa ukuba ngubani owona mqhubi ubalaseleyo kumnatha kukhuphiswano nabadlali abali-12 kwilizwe jikelele. Inani elikhulu leendlela alikho, kunye nemowudi yabadlali abaninzi yokwahlulahlula isikrini.
Yintoni emele ukuxabiswa kukuba sinamaseva azinikeleyo, ke ubumanzi kunye nomgangatho wemidlalo uya kuba ulungile. Ngokubanzi abadlali abaninzi balungile kwaye basebenza ngokuchanekileyo, nangona sishiyeke sinencasa emnandi ukuba sithathela ingqalelo ubungakanani besihloko kunye nokhathalelo olunikwe onke amanye amacandelo.
I-Monster Energy Supercross
Umdlalo we-motocross we-quintessential oxhaswe ngophawu lweMonster lweziselo apho sifumana abakhweli, iisekethe kunye namaqela asemthethweni kwitumente yaseMelika. Into ebonakalayo phakathi kwayo yonke enye into kwinqanaba eliphezulu lokwenza ngokwezifiso esilifumana kwesi sihloko. Singakhetha phakathi koyilo olwahlukileyo, iimveliso, imibala yehelmethi, iiglasi, iibhutsi, abakhuseli, izitikha ... Nje ukuba uthotho lweengcongolo lugqityiwe, siya kusebenza kwiinjongo zethu zokufikelela phezulu.
Sijongene nomdlalo ngaphandle kokuba sisimulator esulungekileyo, ayisiyiyo iarcade epheleleyo, ke ukulandela izifundo ngononophelo kuya kusinceda kakhulu xa uqhuba. Akukho meko yobunzima, ke igophe lobunzima liya kuba yinkqubela phambili, ukusukela ekuqaleni akukho lula ukuphumelela ugqatso, kodwa izinto ziya zisiba mbi njengokuba sisiya phambili. Kananjalo akuyi kuba lula ukugcina ibhayisekile ithe nkqo, ngenxa yoko kuya kuba yinto eqhelekileyo kuthi ukubetha umhlaba nokuba kungalunganga.
Sinendlela ebizwa ngokuba yiComplex, apho sifumana khona imimandla esekwe kwiziqithi zaseMaine, apho siza konwaba khona ngeekhilomitha zokuqhuba simahla ukuvavanya izakhono zethu. Sikwanazo neesekethe zeSuperCross kunye nenye yeMotoCross apho unokuthatha inxaxheba khona nabahlobo.
Icandelo lomzobo lixhomekeke kwiPC esinayo, kodwa ukuba sinomatshini olungileyo, siya kuyonwabela imidyarho yolwelo enemizobo efanelekileyo, Ukuphuma kunye nokulayisha kulungisiwe. Ukukhankanywa ngokukodwa kwi-physics yezithuthuthu kwaye ngakumbi umkhondo. Ezinye iisekethe zinendawo ezinodaka, apho iibhayisekile zethu ziya kushiya umkhondo wazo kunye ne-skid esitshiza udaka. Imizobo ikhatshwa sisandi esimnandi, esiqaqambisa ilitye kunye nengxolo evala imibhobho yeemoto.
Kulapho sinokufumana khona iindaba ezimbalwa, kuba le ndlela yabadlali abaninzi ayitshintshi kakhulu xa ithelekiswa neyandulelayo, kodwa singonwabela imidyarho enabadlali abayi 22. Umdlalo uneseva ezinikezelweyo eziya kuthintela ukubandezeleka okungalindelekanga okanye ukuphuma kwexesha nje ukuba unxibelelwano lwethu likuvumela. Singacwangcisa ubuntshatsheli phakathi koluntu ngemowudi yoMphathi Wobuhlanga, apho siya kuba ngabaququzeleli kwaye siya kuba nakho ukusasaza ubuntshatsheli kumgangatho ophezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Eyona midlalo ilungileyo yesithuthuthu kwiPC
I-Crosscall Core-T4 i-tablet yeendawo zonke [Uhlalutyo]
IJabra Elite 75t, uhlalutyo lwemveliso ejikeleze kakhulu